ပြင်သစ်တိုက်လေယာဉ် - Rikoooo
Dassault Mirage III ကို B ကိုပြီးခဲ့သည့်လေယာဉ်ခရီးစဉ် FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 12.2 ကို MB
အတွက် FSX သဟဇာတမူကွဲ hereThis ကိုကလစ်နှိပ်ပါအသစ်သော features တွေနဲ့ animations တွေကိုအများကြီးနဲ့လုံးဝ reworked မော်ဒယ်ဖြစ်ပါသည်: အပြည့်အဝအခုမှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ကွဲပြားခြားနားသောမြတ်သောအရာထူး, ထွတ်ဖြစ်စဉ်ကို, ဘီးလုပ်ကွက်များနှင့်မြေပြင် animations တွေကိုအသစ် gauge နဲ့ကာတွန်းအလင်းအိမ်နှင့်အတူတိုးမြှင်ကို virtual cockpit, etc.The .. ။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Patrice Grange
Dassault Mystère IV တစ်ဦးက FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 35 ကို MB
နှင့်သဟဇာတပုံစံများအတွက် FSX အရည်အသွေးမြင့်၏ hereSuperb မျိုးပွားကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အရာအားလုံးပါဝင်သည်: ပြင်သစ်အတွက်အသုံးပြုသူကို manual ဖတ်ရှုဖို့အသံ, ကို virtual cockpit နဲ့ model.Be သေချာ။9repaints ပါရှိသည်။ အဆိုပါ Dassault Mystère IV တစ် 1950s ပြင်သစ်တိုက်လေယာဉ်-ဗုံးခွဲသူလေယာဉ်ပျံ, ပထမဦးဆုံး transonic aircra ခဲ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ အန်ဒ Chancel, RESTAURAVIA
Dassault Mirage5et5Package ကို FS2004 ခေတ်မီ HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 17 596
Size: 26.3 ကို MB
အဆိုပါ Mirage5အကောင်းဆုံးကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားသောပြင်သစ်တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်သစ် Mirage (duck, စုံစမ်းစစ်ဆေးဆီမဖြည်) ၏အဓိက pack ကို။ အားလုံးမော်ဒယ်များထိုကဲ့သို့သောခတ်, ဖျက်လိုဖျက်ဆီး, လေယာဉ်မှူးအခန်းအဖြစ်၎င်းတို့၏ animations တွေကိုရှိသည်, etc..The VC ကိုအ Mirage 5COAM မှတတ်နိုင်သမျှနီးစပ်သည်။ Photorealism, panel က, အထွာ, နှိုးဆော်သံ panel က, ရေဒါ, HUD ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မော်ဒယ်, panel က, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, အထွာ, Eduardo Fadul xml သက်ရောက်မှုများရော့ Barendregt HUD ဖြစ်သူ Scott Printz ။ ရေဒါအဲရစ် Marciano
Dassault Mirage III ကို EZ FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 16 151
Size: 8.7 ကို MB
တိုက်လေယာဉ်။ Description: Mirage IIIE စီးရီး Z. အခန်းက္ပ: ကြားဖြတ်! ဒါဟာအဆင်းလှ၏! တစ်ခုမှာ repaints ။ တစ်ဦးက FS2004.The Mirage III ကိုရှိရပါမည်နှောင်းပိုင်း 1950s စဉ်အတွင်းပြင်သစ်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့် Dassault Aviation ကဒီဇိုင်းတစ်ခုဘက်စုံသုံးလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥရောပ၏ပထမဦးဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Thinus Pretorius
Alpha ဂျက်လေယာဉ် Jaguar ကို FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 18 863
Size: 14.4 ကို MB
ဤသည်က၎င်း၏ဒါကြောင့်အတိအကျအတောင်ပံ woth အ Jaguar ကိုတိုက်လေယာဉ်၏! ကျနော်တို့နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အောင်မြင်ရန်အများအပြားအတွက် add-ons တွေကိုစုဝေးကြပြီ။ အဆိုပါ panel ကို, ပြည့်စုံသာယာသောနှင့်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသံကိုတညျ့ခဲ့ကြသည်။ ပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့နှင့်အတူကယ်နှုတ်တော်မူ၏အများအပြားအတွက်လက်ဆောင်။ အဆိုပါဓါတ်ပုံ perfec နှင့်အတူ Tel Aviv ကျော်သိမ်းယူခဲ့ကြ ... ဆက်ဖတ်ရန်
Dassault Rafale FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 47 679
Size: 13 ကို MB
3 ဆန္ဒပြပွဲနှင့်အတူရရှိနိုင်သော repaints: ရိန်း, သရုပ်ပြနှင့်ကြားဖြတ်။ အသံကသိပ်ကောင်းပါတယ်။ စာရေးသူကိုကျေးဇူးတင်များအတွက်အရည်အသွေး work.The Dassault Rafale omnirole ပြင်သစ်ထုတ်လုပ်သူ Dassault Aviation အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ထုတ်လုပ်ပြင်သစ်စစ်တပ်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အ generati ပိုင် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ စိရယျလျ, ဖရန့် Safranek, Pierre ၏ Marchadier, Sharky, Antoine Osmond, Mevel Nicolasr
Dassault Mirage F1 FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 35 515
Size: 32.5 ကို MB
Dassault တိုက်လေယာဉ်။ အားလုံးအချိန်အနိမ့်အမြင့်ထိုးဖောက်မှု, afterburner, အသေးစိတျ, ဘီး chocks, အရာအားလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လေး repaints မှရွေးချယ်မှု, အသံအလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ Gmax ဖန်တီးမော်ဒယ်။ ဒီ model နှင့်အပိုအလုပျအတှကျရေးသားသူ Kirk OLSSON မှကျေးဇူးတင်ပါသည် done.The Dassault Mirage F1 ကိုယ့် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Kirk က Olsson